Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Eli Roth Directive Killer Shark Movie MEG
Eli Roth Directive Killer Shark Movie MEG
by Admin Jona 16, 2015
by Admin Jona 16, 2015 456 hevitra
Manamarika ny faha-40 taonan'ny valanorano, izay navoaka voalohany tany amin'ny teatra tamin'ny 20 Jiona 1975. The Spielberg classic miverina amin'ny sinema amin'ity faran'ny herinandro ity amin'ny fankalazana, ary ankehitriny dia toa tsy ho ela isika dia hanana sarimihetsika antsantsa mpamono olona vaovao hankafizantsika amin'ny efijery lehibe.
Isan-karazany namaky ny vaovao nahafaly androany hariva fa Cabine Fever/Akanin'ny tanora Ny talen'ny Eli Roth dia eo am-panaovana lahateny hitarika fampifanarahana amin'ny mpivarotra ao New York Times Meg: vaovaon'ny fampihorohoroana lalina ho an'i Warner Bros., tetik'asa efa niasa hatry ny ela izay efa amina dingana amam-pandrosoana efa ho roapolo taona.
Ilay boky, nosoratan'i Steve Alten, dia momba ny antsantsa taloha taloha. Ny tantara dia mihodinkodina eo amin'ny lehilahy roa izay mivondrona mba handanilana ny antsantsa taloha izay mandrahona ny morontsirak'i California. Ny Megaladon, raisina ho iray amin'ireo mpihaza lehibe indrindra sy mahery indrindra teo amin'ny tantara, dia mety hahatratra ny halavany 60 metatra.
Samy nanandrana nanamboatra ny tantaran'i Alten i Disney sy i New Line Cinema, ary nisy fotoana niraikitra i Guillermo del Toro. Ny script vaovao dia nosoratan'i Dean Georgaris, ary herinandro vitsivitsy lasa izay no nahalalanay an'i Warner Bros.ary nametraka ny fampifanarahana tamin'ny lalana haingana.
Meg dia nofaritana ho “Jurassic Park misy antsantsa, ”Noho izany isika dia afaka mihevitra fotsiny fa ny fahombiazan'ny fandraketana ny Jurassic World misy ifandraisany kely amin'ny fanambarana androany. Ireo mpankafy ny tantara dia nahatsapa nandritra ny taona maro fa ny fampifanarahana dia mety hampatahotra ny antsantsa indray, ary mieritreritra aho fa i Roth no lehilahy lavorary amin'ilay asa.
Io no antsoiko hoe vaovao mahafaly, ry namana.